A: Manamboatra makiazy matihanina izahay.
3.Q: Manaiky OEM ODM ve ianao ary azonao atao ve ny manao ny endrika ho anay?
4.Q: Mandra-pahoviana no azoko antenaina haka ny santionany?
5.Q: Ahoana ny amin'ny fotoana fitarihana amin'ny famokarana betsaka?
A: Amim-pahatsorana, miankina amin'ny habetsahan'ny filaharana sy ny vanim-potoana nametrahanao ny filaminana. Raha ny mahazatra dia 25 - 60 andro izany. Izahay dia orinasa ary manana fikorianan'ny vokatra matanjaka izahay, soso-kevitra hanombohana ny fangatahana roa volana alohan'ny daty tadiavinao hahazoana ny vokatra ao amin'ny firenenao.
Izahay eto dia hanampy anao --- azafady, aza misalasala mandefa mailaka aminay amin'ny irisbecosmetics@gmail.com.